I- manicure enhle eluhlaza okwesibhakabhaka iyaqhubeka isendaweni. Ugcizelela ukulungiswa nokuphakama komnikazi, ukuphakamisa isimo sengqondo nokuheha imibono yabanye. Ngaphandle kwalokhu ukukhwabanisa okuthandwayo ukuthi kuzohambisana nabesifazane bonke, ikakhulukazi abasebasha. Okuluhlaza okwesibhakabhaka - umbala wesibhakabhakeni, ongenandaba, oshayayo newomoya. Kufanele kukhunjulwe ukuthi umuthi owenziwe nge-blue shades kufanele ufaneleke, ugcizelela ngokuphelele isithunzi sesandla sowesifazane, futhi, ngeshwa, ngezinye izikhathi amaphutha. Ngaphambi kokukhetha lo mbala we-manicure, hlanza isikhumba sezandla kanye ne-marigold. Izipikili ezihlaza okwesibhakabhaka zizobukeka zingenasici emandleni ahlanzekile futhi anempilo. Ikakhulukazi le manicure ifanelana namantombazane anamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka.
Kusho ukuthini ukuhlunga okwesibhakabhaka?
I-blue manicure iheha ukunakwa, ngakho-ke akuwona wonke amantombazane anquma ukukwenza. Ngaphezu kwalokho, ukuze usebenzise kahle i-nail polish eluhlaza okwesibhakabhaka, udinga isineke nekhono: uma kwenzeka lo mbala, kubalulekile ukuba ube nenembile ngangokunokwenzeka. I-shades of sky-blue iyakulungele amantombazane omshado, ngoba afanekisela ukuthula, ukuthula nokuvumelana. Umbala ulungile ngoba uyimvelo, uyaphila, awunayo i-unobtrusive. Unika umnikazi wakhe amandla okuphila, isimo sengqondo esihle futhi isikhathi eside sigcwele amandla. Umbala ohlaza okwesibhakabhaka uwuphawu lwezimfuno eziphakeme nokuxazulula zonke izinkinga.
Izinketho ze-nail nge-lacquer eluhlaza okwesibhakabhaka
I-manicure eyenziwe nge-lacquer eluhlaza okwesibhakabhaka izobukeka ingavamile uma ihlanganiswa ngomhlobiso omuhle. Ukuze wenze umklamo omuhle wezipikili eziluhlaza okwesibhakabhaka, uzodinga ama-rhinestones, ama-sequin, ubuhlalu, ama-sequin kanye nezinye izindwangu zokuhlobisa ezenzelwe ukugcoba. Ngalo mthunzi, nakanjani noma yiziphi izinto zokuhlobisa ezihlanganisiwe.
Umholi we-design ye-nail yi-manicure yaseFrance, eyenziwe emthunzini wasezulwini. Ngaphezu kwalokho ukuthi kubonakala kuhle futhi kugcina izipikili isikhathi eside. Ijacket yenziwa nge- garnish garnish, enesakhiwo esihle. Kulula ukuhlanganisana namanye ama-shades amancane: obomvu, obomvu, omhlophe. Ukuze wenze umuthi wesiFulentshi ekhaya, uzodinga:
I-lacquer ebomvu. Kungcono ukuthatha umthunzi we-Pastel okhanyayo, oguquguqukayo.
Izitika ze-stencil ezimhlophe ze-French manicure. Uma kungenjalo, imivimbo emincane ingadonselwa ngokusebenzisa ibhulashi elincanyana.
I-varnish engavamile yesisekelo.
I-fillet, izikhali, amafutha okunciphisa i-cuticle.
Okokuqala udinga ukulungisa izipikili zakho ze-manicure. Yenza ibhati lokufudumala ngezandla ukuze unciphise isikhumba nxazonke ze-marigold. Engeza isitsha samanzi afudumele ngesobho elimanzi noma i-gel, amafutha anamakha, usawoti usawoti. Uma i-polish endala ye-nail ihlala ezikhonkwane, isuse ngaphambi kokuthi uphume isikhumba. Okulandelayo, hlanza izipikili, uqede ngokucophelela isikhumba esidlulele, uma kunesidingo, susa i-cuticle. Uma inqubo yokulungisa i-nail isiphelile, qhubeka nokugaya ubuso bawo. Lokhu ukuqinisekisa ukuthi ijaji yeklasi ihlala isikhathi eside.
Faka isicelo kwizipikili ezihlanzekile i-lacquer eyinhloko eluhlaza okwesibhakabhaka.
Kusukela phezulu, ngezansi kwendwangu ye-nail, gcoba imichilo emhlophe.
Ukupenda kwe-lacquer elimhlophe kuhle, imigqa ecacile, ulinde kuze kumile. Bese ususe imicu, umboze ungqimba nge-fixer.
Yini okufanele ugqoke umuthi ohlaza okwesibhakabhaka
Izitayela zamuva zetheksthi ziqinisekisa ukucabangela ukuthi ukukhethwa komzimba kukhethwe izingubo noma izakhi zokugqoka nezesekeli. Nokho, kunezincazelo kuzo zonke imithetho. Izipikili ezihlaza okwesibhakabhaka zihlanganiswe ngokugcwele nezembatho kwisitayela sezemidlalo: T-shirts, T-shirt, shirts, jeans, sneakers, izingubo zasehlobo kanye ne-sarafans. I-blue blue ihambisana kahle nombala omhlophe. Khumbula ukuthi umthunzi omnyama ohlaza okwesibhakabhaka ufanelekile kusihlwa, kanye nokukhanya okusebenzayo kanye nomsebenzi wansuku zonke. Izipikili ezihlaza okwesibhakabhaka kuyindlela enhle yamaholidi ehlobo.
I-pink ne-blue nail design
Izinhlobonhlobo ze- pink and blue design yezipikili ezisethiwe. I-manicure enjalo izoba kufaneleka ukubuka ngisho nasemcimbini, uma i-shades esemqoka ikhetha i-palette elula, epholile. Ukuklama kwezipikili ezinemibala emibili kunzima kakhulu, ngakho-ke kungcono ukuthemba inkosi. Ama-shades ama-pink ne-blue ahambisana kahle, angumuntu omnene nowomoya. Kuyinto engavamile futhi kulula ukubona ushintsho lwe-gradient kusuka eluhlaza okwesibhakabhaka kuya ku-pink; Izipikili ze-pink-eluhlaza okwesibhakabhaka kanye nomshini wokuhlobisa nomunwe; I-matte pink kanye ne-lacquer eluhlaza okwesibhakabhaka ezinzikhonkwane ezincane, ezigciniwe.
Noma kunjalo imidwebo kanye namaphethini ehlukile ngokuhlanganiswa ne-blue and pink varnish zifanelekile. Kuzobukeka sengathi i-manicure enhle, uma izipikili ezintathu zimbozwe nge-pink varnish, futhi ziluhlaza okwesibhakabhaka. Esiqongweni sefashini, ama-gradients, ama-rhinestones, ama-sequin, ubuhlalu, ama-stencil, okuzokwenza kube nzima ukuklanywa kwe-pink ne-blue.
Indlela yokwenza i-manicure emnene
Izipikili zemibala eluhlaza okwesibhakabhaka zingahlotshiswe ngezingubo ezinemibala noma zesiliva, izinsimbi, ubuhlalu obukhulu ezinhlobo zezimbali. Ukugqoka lo mbala ngezipikili kuphela, okungukuthi, ngaphandle kokuklanywa okungeziwe, kuhlukahluka kwamantombazane asesibindi futhi avulekile, ngoba lo mbala usebenza kakhulu, naphezu kwentando yemvelo. Hlela kahle u-manicure omnene ungaba ngosizo lwe-sequin, imidwebo yezimbali, amatshe amachiza, imivimbo, izintantathu, ngendlela yesigodlo; Ungakwazi ukudweba amafu, isibhakabhaka esinezinkanyezi, i-holography, i-abstraction. Ekubhaliseni kuyadingeka ukusebenzisa ibhulashi elincane elincane lomuntu .
Yini ongayishintsha umuthi womuntu ohlaza okwesibhakabhaka
Naphezu kokuthandana nokuthandana okwesibhakabhaka, kubhekwa njengento eqinile uma umklamo wayo ungahambisani nezakhi zokuhlobisa. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi emakhazeni abanda, ensimbi. Ukuze uhlukanise umuthi ohlaza okwesibhakabhaka, sebenzisa amathiphu alandelayo:
Hlela ama-marigolds aluhlaza okwesibhakabhaka ngamadayoni omzimba we-metallic hue.
Umhlobiso omuhle wesibhakabhaka: i-chamomile, ama-roses ahlangana kahle nombala wezulu. Kwanele ukukhipha umklamo onjalo kuminwe eyodwa noma emibili.
Isihlabathi sombala, izinwele zokugqoka - phezulu kwefashini ekwakheni izipikili. Ukusabalalisa okuhle kugcizelela ngokuphelele umoya we-blueiness.
Ukwakhiwa kwezipikili kumbala okwesibhakabhaka
Ungenza umuthi ohlaza okwesibhakabhaka ekhaya. Okokuqala, udinga ukuletha izipikili zakho ngendlela bese ukhetha okukhethwa kukho okukhethwa kukho. Enye yezinto ezithandwayo futhi ezilula ekubulaweni yiyona "Design Azure Wave". Isigaba sokuqala sizobe sigubungele ama-marigolds ane-lacquer emhlophe. Bese wenze i-gradient eluhlaza okwesibhakabhaka ku-gradient - kufanele uthole ushintsho olusheshayo oluvela emhlophe kuya eluhlaza okwesibhakabhaka. Okulandelayo, ibhulashi elincanyana, ngaphandle kokulinda ukomisa, udinga ukususa i-lacquer eluhlaza okwesibhakabhaka, futhi ukwenze ngesimo samagagasi angajulile. Susa ukugqoka okwedlulele esikhumbeni esizungeze izipikili, unike umuthi wokubukeka ubukeka uphelile, ulungise ngesisekelo esibala.
Amasters of manicure batusa ukuklama izipikili eziluhlaza okwesibhakabhaka ukuze basebenzise ama-sliders angajwayelekile. Lezi yi-stencils, ezihlukaniswe nesisekelo sephepha ngamanzi futhi zifakwa ungqimba olomile lwe-varnish. Le nqubo ikuvumela ukuthi wenze umklamo omuhle ongenaphutha wezinzipho eziluhlaza okwesibhakabhaka ngokwakho, ngaphandle kosizo lochwepheshe. Ukuze le manicure ihlale isikhathi eside ngangokunokwenzeka futhi ukujabulisa inkosikazi yayo ngamathoni acebile, yimboze nge-varnish engenambala.
Scrapbooking imibono. Ibhuku elethusayo: Izindlela albhamu zezingane